Tanora · Mey, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Mey, 2017
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Mey, 2017
Pakistan: Fihaonan'ny Bilaogera Tao Lahore
Azia Atsimo31 Mey 2017
Tamin'ny 23 Novambra 2008, bilaogera Pakistaney maherin'ny 100 no nihaona tamin'ny fivoriana tao Lahore , fihaonana voalohany tao an-tanàndehibe tamin'ity karazany ity
Koety: Zavakanto Sa Fanimbana Zavatr'olona Ny Graffiti?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana31 Mey 2017
Fanontaniana iray mitranga matetika: Zavakanto sa fanimbana zavatr'olona ny graffiti ? Vao haingana ity fanontaniana ity no teo anivon'ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Koesiana.
Brezila: Topimaso An-tsarin'ny Campus Party Tao Brezila
Amerika Latina30 Mey 2017
Nifarana ny Alahady teo ny Campus Party taona 2009 tao São Paulo. Mihoatra ny 6.500 ny olona nandray anjara tamin'ity andiany faharoa ity izay azo lazaina fa hetsika lehibe indrindra momba ny teknolojia sy ny kolontsaina nomerika ao Amerika Latina. Ho hitanao ato ny sasany amin'ireo sary mahaliana indrindra.
Ny TIC Ho Fampandrosoana Any Afrika Miteny Sy Mampiasa ny Teny Frantsay
Borkina Faso29 Mey 2017
Ankehitriny, tsy ilaina ny hanaporofoana hoe mandray anjara amin'ny fanatsaràna ny kalitaon'ny fanabeazana ao Afrika ny fampidirana ny TIC, fa ny famaritana ireo làlana sy fitaovana afaka mampaharitra ny fampiasàna ny TIC any an-tsekoly, any amin'ny sekoly rehera no ilaina.
Polonina: Ampitsikio ny Ankizy! – Mora ny Manao Izany!
Eoropa Afovoany & Atsinanana27 Mey 2017
Mpilatsaka an-tsitrapo mavitrika hatrany i Tomek sy Weronika na dia mbola tanora tokoa aza izy ireo. Tamin'ny taona 2009, nanomboka ny Dream Mail izy ireo, fanentanana asa fanasoavana izay mampiroborobo ny fanoratana taratasy sy ny karatra paostaly ho an'ireo ankizy marary mafy.
Zeorzia: Ny Fahamaroam-Piterahana Masina!
Azia Afovoany sy Kaokazy26 Mey 2017
Nitombo 20 isan-jato ny taham-piterahana ao Zeorzia ary nahazo tombontsoa tamin'izany ny Eglizy Ortodoksa ao amin'ny firenena. Ny fampanantenana nataon'ny mpitarika fiangonana Zeorziana amin'ny fanaovana batisa ireo zaza vao teraka no tompon'andraikitry ny fahagagana tamin'ity baby boom nilaina fatratra tao amin'ny firenena Kristianina iray ity. Toa nahagaga ireo bilaogera izany
Pôrtô Rikô: Politikam-Pananahana
Amerika Latina24 Mey 2017
"Hey Neny, inona izany fanalàna zaza? Efa nanao izany ve ianao? Ummm eny, ary efa nihevitra ny hanala anao aza aho. Ao anatin'ity lahatsoratra fanangonana ity, miizarazara ny hevitr'ireo bilaogera Pôrtôrikàna momba ny resaka maha-vehivavy, ny zo ara-pananahana ary ny mariazy pelaka.
Ejypta: Mirongatra Manerana Izao Tontolo Izao Ny Firaisankina (Lahatsary)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana23 Mey 2017
Tamin'ny Asabotsy, tao an-tanàn-dehibe samihafa manerana izao tontolo izao, nanao fihetsiketsehana ho firaisankina amin'ireo mpanao hetsi-panoherana Ejipsiana ny olona. Famintinana ny sasany tamin'ireo lahatsary ny diabe nivoaka an-tserasera ity.
Lahatsary Mampiseho Ny Fiantraikan'ny Fahafatesana Eo Am-piterahana Eo Amin'ny Fiarahamonina
Afrika Mainty23 Mey 2017
Rehefa mamoy ny ainy mandritra ny fitondrana vohoka, ny fiterahana na noho ny fahasarotana taorian'ny fiterahana ny vehivavy, dia tsy vitan'ny hoe misy fiantraikany eo amin'ny fianakaviana ihany izany fa koa ny fiarahamonina manontolo
Fitaovana Hanehoana Hevitra Manokana Sy Hiarovana Kolotsaina Ny Hip-Hop Ho An'ny Tanoran'ny Firenena Voalohany Sasany
Amerika Avaratra23 Mey 2017
"ity no andro handrenesanao ny hikiakianay/satria toy ny tanora very làlana amin'ny fiainana izahay/kanefa mino aho fa indray andro any dia hitsangana izahay"